पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि मार्सीवाला प्रसाईँ फरार – News Portal of Global Nepali
पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि मार्सीवाला प्रसाईँ फरार
17th January 2020 मा प्रकाशित
प्रस्तावित बी एन्ड सी मेडिकल कलेज, झापाका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । प्रसाईंविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले मानहानि मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।
प्रसाईंविरुद्ध चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले मानहानिको उजुरी हालेका हुन् । यसअघि प्रसाईंले कलेजको सम्बन्धनका लागि आयोगमा जाँदा गिरीले २० करोड रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लगाएका थिए । उनले दुईपटक सम्मेलन नै गरेर गिरीले घुस मागेको बताएका थिए ।
जिल्ला अदालत भक्तपुरले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएलगत्तै प्रशासनले पुर्जी काटेको हो । पुर्जी लिएर प्रहरी टोली प्रसाईंको निवास गए पनि उनी नभेटिएको प्रहरीस्रोतले जनाएको छ । प्रसाईंले आफूविरुद्ध अभद्र व्यवहार, गाली बेइज्जती तथा मानहानि गरेको भन्दै गिरीले महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा उजुरी दिएका थिए ।
प्रसाईंले पुस २३ गते पत्रकार सम्मेलन गरी घुस मागेको आरोप लगाएपछि गिरीले पनि सोही दिन पत्रकार सम्मेलन नै गरेर त्यसको प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिएका थिए । त्यसपछि प्रसाईंले फेरि पत्रकार सम्मेलन गरेर गिरीले मात्र नभएर आयोगका पदाधिकारीले नै घुस माग्ने गरेको आरोप लगाएका थिए । उनले डा. गिरीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी गरेका छन् ।
प्रसाईंले घुस मागिएको विषयमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतलाई समेत जानकारी गराएको बताएका थिए । विवादित कलेजलाई सम्बन्धन दिलाएरै छाड्ने प्रयासमा रहेका प्रसाईंको घरमा यसअघि दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्सी चामलको भात खाएको तस्बिर निकै आलोचित भएको थियो ।
सनराइज बैंकद्वारा पीपीई हस्तान्तरण
मस्जिदमा भीड हटाउन गएका प्रहरीमाथि हातपात
कोरियाले तीन महिना प्रवेशाज्ञा थप्ने
बेलायतमा तीन दिनमा ६ नेपालीको मृत्यु
१५०६४	पटक पढिएको
१०५४१	पटक पढिएको
८८५१	पटक पढिएको
८०५०	पटक पढिएको
५३९५	पटक पढिएको